Izitimela zivame ukufika eBrussels – yaseGhent, Antwerp – esetshenziswa, Brussels – I-Namur. Ungafika nasemazweni angomakhelwane aseYurophu usebenzisa izitimela zeSNCB.
Intengo ye SNCB train tickets kuphakama njengoba usuku lokuhamba lusondela. Ungazigcinela imali ngokubhuka amathikithi akho wesitimela e-SNCB kude ngangokunokwenzeka kusukela ngosuku lokuhamba. Amathikithi esitimela e-SNCB ayatholakala kusenesikhathi 3 ukuze 6 izinyanga ngaphambi kokusuka kwesitimela. Ukubhuka kusenesikhathi kuqinisekisa ukuthi uthola amathikithi wesitimela eSNCB angabizi kakhulu. Zilinganiselwe ngenani, ngakho-ke ngokushesha uyala, okushibhile kuwe. Ukonga imali kumathikithi esitimela e-SNCB, thenga amathikithi akho ASAP.
Izitimela zeSNCB zifunwa kakhulu, futhi ngokuncintisana okuncane, njengamanje zihlala ziyizinketho eziphezulu zezitimela eBelgium. I-SNCB ingakwazi ukusetha imikhawulo yamathikithi esitimela njengaleyo enqabela ukushintshaniswa kwamathikithi noma ukubuyiselwa kwemali ngaphandle kokuthi kunguhlobo lwebhizinisi lwethikithi. Noma kusekhona amawebhusayithi wesithangami lapho ungathengisa khona amathikithi akho ngesandla sesibili kubantu, I-SNCB ayikuvumeli ukuthengiswa kwamathikithi angamasekeni. Lokhu kukusiza kanjani ukonga imali? Oda ithikithi lakho kuphela uma uqiniseka ukuthi uhlelo lwakho luzokusindisa ekubhukeni ithikithi elilodwa kabili ngoba kukhona okuqhamile futhi awukwazi ukusebenzisa ithikithi lokuqala.
Gcina isitimela kukhulu kunakho konke, okuncono, namadili ashibhile kakhulu amathikithi wesitimela eYurophu. Ubudlelwano bethu nabashayeli bezitimela abaningi, imithombo yamathikithi esitimela, futhi ulwazi lwethu ngobuchwepheshe ubuchule ukunikeza Gcina A Isitimela ukufinyelela eshibhe ithikithi isitimela amadili. Asinikezi amadili wamathikithi esitimela ashibhile eSNCB kuphela; sihlinzeka okufanayo ngezinye izindlela ze-SNCB futhi siyaziqhenya ngokuhlinzeka ngamakhasimende okuhle kakhulu emakethe yezitimela.
1) Ufika eCity Center. Lokhu kungenye yezitimela zeSNCB uma kuqhathaniswa nezindiza. Izitimela zeSNCB kanye konke okunye ukuhamba ngesitimela kusuka noma yikuphi ku idolobha enkabeni lomuzi olandelayo. Kuyakongela isikhathi kanye nezindleko ze-cab kusuka esikhumulweni sezindiza ukuya enkabeni yedolobha. Ngezitimela, Kulula ukufika kunoma yiliphi idolobha oqonde kulo. Akukhathalekile ukuthi usukaphi, Brussels, Antwerp, esetshenziswa, noma eLiege, Izikhungo zamadolobha ziyinzuzo enkulu yezitimela zeSNCB!
4) Izitimela zinobungane ngokwengeziwe uma uqhathanisa phakathi kwezitimela nezindiza, izitimela bezizophuma zibheke phezulu. Izindiza ziyangcolisa kakhulu umkhathi ngamazinga aphezulu ekhabhoni awanikezayo. Izitimela ngokuqhathanisa zinikeza okuningi ukungcola okungaphansi kwekhabhoni kunezindiza.
Izakhamizi zaseBelgium, kunezinhlobo ezahlukene zokubhaliselwe, ithikithi lesikhathi esingenamkhawulo, neSizini Ejwayelekile. Okwamazwe omhlaba siphakamisa ukuthi uthenge isikhathi eside ngaphambi kwesikhathi bese uba nenketho eshibhile.
Izitimela ze-SNCB zisuka eGhent zisuka e- IGhent Saint Pieters esiteshini, which is the third-largest city in Belgium and the largest in Flanders.
Liege, Liege IGuillemins yisiteshi sesitimela esiphakathi seSNCB. Ngakho-ke, Isiteshi sesitimela iLiege sixhuma iBelgium emazweni angomakhelwane, making it one of the busiest train stations in Wallonia. Ngaphezu kwalokho, uma uhlela ukuya eJalimane, France, Luxembourg, noma iNetherlands evela eBelgium, kungcono ubeke amathikithi wakho wesitimela e-SNCB kusenesikhathi.
esetshenziswa (I-Brugge – Igama ledolobha elifanayo kolunye ulimi oludumile) isiteshi sesitimela singesinye sezitimela ze-SNCB ezimatasa eFlanders. Ngokwesibonelo, kusuka eBruges, ungakwazi oda ithikithi lakho isitimela kwamanye izindawo athandwayo eBelgium: yaseGhent, Antwerp, and Brussels in less than an hour. The Bruges train station is at a 20 amaminithi’ ukuhamba ibanga ukusuka ku- enkabeni yedolobha, nesikwele esihle se-Old City Markt.
Isiteshi sesitimela se-SNCB eLeuven isiteshi esikhulu sesitimela esifundeni saseFlemish Brabant eBelgium. Lesi siteshi sesitimela esimatasa sixhuma isifunda saseFlemish nezinye izifunda futhi singesinye seziphezulu 5 Iziteshi zezitimela ezimatasa kakhulu eBelgium. Ngakho, ungakwazi travel isitimela Brussels, Isikhumulo sezindiza saseBrussels, Leuven, Antwerp, futhi ngokuyisisekelo noma yiliphi idolobha laseBelgium.
Wena can gcina a ngiyazingesikhathi ngaphambili kwezasekhaya I-SNCB izitimela. Wena kuthanda uthole okwakho isihlalo ngemuva kokubhuka, kepha lokhu akusikho isidingo.